Ahoana no ahafahako mamorona rindranoka ho an'ny tranonkala nefa tsy mahazo karama?
Raha te hamorona rindranasa ho an'ny tranokala ianao raha tokony ho vao mainka hividianana karama - angamba efa nandray fanapahan-kevitra tsara ianao. Andao hiatrika izany - Ny fampiharana ny varotra fifandraisana dia mety ho toa tena ezaka be. Raha ny tena marina anefa, dia misy safidy betsaka kokoa noho ny fanatrarana ny fandrosoanao amin'izao fotoana izao, fa tsy ny tombotsoan'ny fitomboan'ny fifamoivoizana, ny CTR, ny fiovàna, sns.Ny zavatra dia izao no manasongadina ny Google mba hanomezana tombam-bidy tokana sy làlam-panorenana mifandraika amin'ny natiora. Midika izany fa ny mamorona rindranasa ho an'ny tranonkala dia ny fomba tsara tokony hampiasanao fotoana sy ezaka mba hahasarika pejy tsy misy pejy vitsivitsy sy bilaogy mahazatra.Eny, ny foto-kevitra maoderina momba ny kalitao sy ny tranokala mifandraika dia tsy mora toy ny taloha, ohatra, roa na telo taona lasa izay. Ireo fotoana tsara fahiny dia efa nodimandry ela.
Amin'izao fotoana izao, afaka mamorona rindranasa ho an'ny tranonkala ianao amin'ny fampiasana ny drafitra hetsika mety, mifanaraka amin'ny fitazonana tetikady SEO ankapobeny nanara-maso tsy tapaka sy nanitsy azy ireo. Saingy mbola tsy ilaina ny mampanahy - tonga eto ny fampiasana fomba roa azo ampiasaina mba hahazoana rohy tsara. Ny ilainao eto dia ny hampiasa vola fotoana sy ezaka - raha tsy misy iray amin'ireo olona tsy misy tsara amin'ny tànana ianao - ary ny rohy momba ny rohinao dia naorina tsara. Raha toa ny sasany amin'ireto dingana manaraka ireto dia mety tsy handray afa-tsy minitra vitsy monja raha ho azonao daholo ny zava-drehetra, tsy tokony hohamaivanina mihitsy ny fahafahan'izy ireo manatsara ny SEO anao. Noho izany, etsy ambany ny sasantsasany amin'ireo fomba tena tsara indrindra ahafahako mamorona rindranasa ho an'ny tranokala - mazava ho azy, mandeha tsara ary mazava ho azy fa tsy mandoa vola.
mahazo ny votoatin-kalitao izay manome lanjany
Toa hita fa mahasarika mpitsidika maro kokoa amin'ny fampahalalana tsy manam-paharoa sy kalitao sy malalaka amin'ny tena lanjany no mety fomba tsara indrindra ahafahana mamadika rindranasa ho an'ny vohikala ara-boajanahary, ary tsy misy mety hitranga ny sazy famaizana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny manome votoatin'ny pejy mandresy lahatra (lahatsoratra matanjaka, sehatra fianarana, sns. ) mba ahafahan'ny olona maromaro mizara izany, mampifandray azy io, ary manonona azy any an-kafa ao amin'ny tranonkala. Amin'izany dia diniho ny fanavaozana ny ampahany amin'ny asa soratry ny soratra an-tsoratra ho zavatra azo tsapain-kevitra sy manintona, toy ny filazana ilaina, tabilao, fandalinana fohy, tabilao, sns.
Ataovy ny ankamaroan'ny mpifaninana
Eny ary, tsy misy maharatsy ny mitsikilo ny mpilalao fifaninanana ao amin'ny niche anao fotoana fohy mba hahafantarana bebe kokoa momba ny traikefa nahomby teo amin'ny rohy manorina mba hanatsarana tsara ny ezaka bebe kokoa azonao atao. Aza misalasala manandrana mampiasa iray amin'ireto fitaovana malaza an-tserasera ireto ho an'ny fikarohana sy famakafakana bakalorea amin'ny alàlan'ny fifandraisana malalaka. Raha ny amiko, dia hitako fa ilaina kokoa ny fikajiana manaraka mba ahafahana mijery ny mombamomba ny mpifaninana iray - Moz "Open Site Explorer" (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Miondrika Frog SEO Spider. Afaka miasa tsara ny zava-drehetra any. Eritrereto fotsiny ireo lalana efa voamarina mankany amin'ny pejy PageRank sy loharano avo indrindra mba hamoronana rindranasa ho an'ny tranokala na blôgy amin'ny anao manokana.
Raha manana votoatiny matanjaka amin'ny famokarana rindran-damba tsara ianao ary mampiasa ny rivodoakanao mba hametahana ny fandreseny tsara indrindra ho an'ny tombontsoanao - dia ho lehibe nefa mbola tsy ampy. Amin'izany fomba izany, aoka ho azo antoka fa ny asa mafy dia mafy tsy ho amin'ny fananganana backlinks ihany, fa noho ny fahefana matanjaka sy ny fanentanana ampahibemaso koa. Diniho ny resadresaka nataon'ireo mpilalao goavam-be ao amin'ny indostrianao, manintona mpihaino marobe amin'ny media sosialy malaza, manitatra ny sangan'asanao tsara indrindra amin'ny alàlan'ny bolongana sy lahatsoratra, ary manome fanehoan-kevitra hendry sy mahagaga mba hankafizana ireo backlinks mendrika ho valin'izany Source .